Ny fisintomana rehetra ho an'ny Preprar3D v5
Nohavaozina taminy 16-05-2021
Nohavaozina taminy 23-02-2021
Fonosana famonjena an'i Bell 212 P3D 64-bit
3 275 3.75 (8)
Nohavaozina taminy 27-11-2020
Sambany mifanaraka amin'ny Prepar3D v4 sy v5 (ihany), ity ilay fonosana Bell 212 "Afom-panavotana afo" Prepar3D v4. Tamin'ny voalohany, ity add-on dia noforonin'ny ekipa Hovercontrol ho an'ny FS2004 avy eo navadika ho P3Dv4 nataon'i Nicholas Mitchell ary namboarin'i Rikoooo.
Avy amin'ny maodely Original nataon'i Jordan Moore sy George Arana. Niova ho P3D teratany avy amin'i Nicholas Mitchell "Scorch00" sy George Arana "euroastar350" Package nataon'i Nicholas Mitchell. Fanamboarana maro nataon'i Rikoooo
Nohavaozina taminy 26-11-2020
Nohavaozina taminy 23-10-2020
Nohavaozina taminy 21-10-2020
Boeing 787 Family + Cockpit Virtual FSX & P3D
Nohavaozina taminy 14-03-2021
Faly aho manolotra cockpit virtoaly vaovao, ny cockpit FREEWARE mandroso indrindra ho an'ny Boeing 787 miorina amin'ny MagKnight. Saingy tsy izany ihany, satria fonosana feno izy io, izany hoe ankoatry ny famoronana cockpit virtoaly vaovao dia nasiako koa sy nampidiriko ireo maodely 3D an'ny Boeing 787-8 / -9 / -10 GEnx.
Amin'ny alàlan'ny fananana VC avy amin'i Magknight ary ny fanovana nataon'i Rikoooo. XML Gauges miorina amin'ny Gavin Munro. Modely ivelany nataon'i Hiroshi Igami (TDS). 787 GEnx Soundset nataon'i Kairi Akai. Rikoooo Liveries avy amin'i Ken WEBBER. Ny atin'ny hafa nataon'i Carlos Eduardo Salas
Nohavaozina taminy 04-07-2020
Eurocopter EC120B Colibri ho an'ny FSX ary P3D (hatramin'ny v5), ity add-on dia mahagaga, betsaka ny fisaorana an'i George Arana (Eagle Rotorcraft Simulations) noho ny fifindrana FSX / P3D endrika.
Nosoratan'i Nemeth Designs. FSX/P3D fiovam-po teratany avy amin'i George Arana / Eagle Rotorcraft Simulations
Fampidinana: Pejy 1 amin'ny 14 Valiny 1 - 19 amin'ny 248